Dowladda Maleysia oo shaaca ka qaaday in ay ciidamo u direyso dalka Somalia – idalenews.com
Dowladda Maleysia oo shaaca ka qaaday in ay ciidamo u direyso dalka Somalia
Muqdisho(INO)- Wasiirka difaaca dalka Maleysia Datuk Seri Hishammuddin ayaa shaaca ka qaaday kaddib kulan uu la qaatay r/wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mohamed Omer Arteh Ghalib in dalkiisu uu u dirayo ciidamo dalka Soomaaliya.
Wasiir Hishammuddin ayaa sheegay in codsiga ciidamada uu kaga yimid dowladda Soomaaliya, baarlamaanka dalkiisuna uu ansixiyay.
Ciidamadan ayuu sheegay wasiirku in laga taakuleyn iyo qalabeyn doono magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia, waxaana uu intaasi raaciyay in ciidamadaasi noqon doonaan kuwo howlo samafal ah qaban doono.
” – Waxaan ka wadahadalnay r/wasaare xigeenka Soomaaliya arrintan codsigooda ciidan, waxaana ay soo jeedsadeen in laga taageero dhanka gar-gaarka, caafimaadka iyo tayeynta ciidamadooda”, ayuu yiri wasiir Hishammuddin.
Waxa uu wasiirku qeexay cadadka ciidamada ay u dirayaan Soomaaliya iyo howsha ay qabanayaan, wuxuuna sheegay in guud ahaan ay 27 sarkaal ay u dirayaan Soomaaliya kuwaas oo 17 ka mid ah ay qabanayaal howlo gar-gaar.
Ciidamadan ayaa ku imaanaya Soomaaliya diyaarad ciidan oo nooca loo yaqaan Hercules C-130 ah, waxaana ay sidoo kale siddaa gar-gaar lagu taakuleynayo dadka abaareysan.
Dowladda Maleysia ayaa waxaa ay ka joogaan ciidamo dalka Sacuudiga, waxaana qeyb ka mid ah ciidamadan kuwa loo soo dirayo gudaha Soomaaliya.
Lama sheegin inta mudada ay ciidamadan joogayaan dalka.
Maleysia ayaa sidoo kale waxa ay taageero uga raadineysaa waddamada ay xulufada yihiin ee Saudi Arabia, Bahrain, Qatar iyo qaar ka mid ah dowladaha qaaradda Aasiya.
Daawo Sawirada: Somalida lagu laayay dalka Yemen
Madaxweyne Erdogan oo ka codsaday turkida ku nool Yurub in ay dhalaan ugu yaraan 5 carruur ah